Uluhlu 8.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-8
Amaxesha ama-8 etafile
Itheyibhile ye-8 yitafile eya kuthi isixelele iziphumo zokongeza inani elifanayo kali-8. Into esixelelwa yona yile theyibhile isi-8 yeyokuba naliphi na inani eliphindaphindwe ngesi-8 liyakuba lelo nani longezwe amaxesha asisi-8.
Masibone umzekelo: ukuba sineebhasikithi ezisi-8 ezineewotshi ezi-3 inye, ngoko ke siyakuba neewotshi ezingama-24 okanye into efanayo 8 umphinda-phinde ngo-3 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24).
Uya kuyisebenzisa le tafile ebomini bakho nanini na ufuna sazi isiphumo samaxesha ama-8 ngesixa, nokuba yimithetho esayilwayo, impahla, njalo-njalo ...
Iimpawu zetheyibhile e-8 :
• Le tafile isinika iziphumo zalo naliphi na inani eliphindaphindwe kasi-8, ilula kanjalo.
• Le nto itafile iyenzayo yongeza ubungakanani obufanayo amaxesha angama-8 ngale ndlela sinokwazi ukuphinda-phinda, umzekelo, 8 × 5 = 40.
• Itheyibhile ka-8 izakusinceda ebomini bethu, phakathi kwezinye izinto ezininzi, ukuba sazi amaxabiso ngokomzekelo iimpahla eziyi-8 ezixabisa ngokulinganayo.
• Ukuba sineebhasikithi ezisi-8 ezineebhanana ezi-2 inye, siyakuba ne-8 × 2 = iibhanana ezili-16 xa zizonke.
• Ukuba sineebhasikithi ezisi-8 ezinee-apile ezi-4 nganye, siyakuphinda-phinda 4 × 8 = 32.
• Ukuba sineebhasikithi ezisi-8 ezineelekese ezi-6 kwinto nganye, siyazi ukuba ukusebenzisa uphinda-phindo 6 × 8 = 48, siyazi ukuba sizakuba neelekese ezingama-48. Kulula kakhulu!